Semalt: Amathiphu Ngendlela Yokuvimbela Amazwana Ugaxekile Ku-WordPress Yakho
Ukubamba ukulalela izethameli zakho nokukhuthaza ukusebenzisana komsebenzisi kubaluleke kakhulu uma kuziwa ekukhangiseni. Ukubaluleka kwesigaba samazwana kwiwebhusayithi yakho akukwazi ukunakwa. Ngengxenye yokuphawula, ungaqala ngokushesha izingxoxo ze-intanethi futhi uhlaziye impendulo yamakhasimende ngesikhathi sangempela.
U-Andrew Dyhan, isazi esihamba phambili se Semalt , ucacisa lapha okudingayo ukwazi ngo-Askimet - natural walnut table top.
Emva kokufaka i-WordPress emawebhusayithi, amaklayenti athola i-Askimet njengenye yezici ezijwayelekile. Inombolo enhle yabathengisi bemakethe ifaka i-WordPress kodwa ihluleka ukusebenza isici se-Askimet. Ukuvimbela nokuvimbela ama-spambot kuyinto umsebenzi owenzayo ongakwenza ngokushesha kwideskithophu yangakini.
Ukuhlangana nokugaxekile kwamazwana kuwebhusayithi yakho akumnandi. I-Askimet yasungulwa futhi yaklanywa yi-WordPress 'abasunguli. I-Askimet isiza ababonisi bokuthengisa ukumaka nokukhomba amazwana ogaxekile. Ngemuva kokuhlukanisa nokuhlonza ukugaxeka kogaxekile, isevisi yewebhu ye-Askimet ithumela amazwana esikhundleni sabathengisi. Cabanga ngokuthola ukhiye wakho we-Application Programming Interface (API) bese uhlaziya amazwana akho ogaxekile ngesonto.
Inyosi ye-Antispam ingenye yama-plugin aphezulu aphezulu okusiza ukuvimbela amazwana ogaxekile ku-WordPress. Ngemuva kokuvuselela izinyosi ze-Antispam, akukho okubhalwe phansi okudingekayo. Inyosi ye-Antispam isebenzisa idatha elwa nogaxekile ukuze ihlaziye amazwana. Inyosi ye-Antispam iphinda ihlole izikhathi lapho izivakashi zibeka khona amazwana. Uma ngabe iklayenti elingahle libonise amazwana ngokushesha ngemva kokulayishwa okuthunyelwe, izinyosi ze-Antispam zedlule njengamazwana wegaxekile we-WordPress..
Eyaziwa nangokuthi i-Google Captcha, i-ReCaptcha isiza abathengisi ku-Captcha ukungena ngemvume kwamaphasiwedi, amazwana kanye neziqinisekiso zokubhalisa. I-Google Captcha idinga abasebenzisi bokugcina ukuthi baqinisekise ubunikazi ngaphambi kokuba bakwazi ukufinyelela iwebhusayithi. Lokhu kuye kwaba esinye sezixazululo ezinhle kakhulu ezisetshenziselwa abathengisi ukuvimbela nokuvimbela i-WordPress ogaxekile.
Cabanga ukufaka nokuvuselela i-plugin ukuqhubeka. Qinisekisa ifomu lakho ukuthola imiphumela ewusizo. Ukuze uhlole ukuthi amazwana alayishwa yini kuwebhusayithi yakho ye-WordPress, phuma uphinde uzame ukuhambisa amazwana.
Ukukhubaza ukulandelwa kwe-Trackbacks ku-WordPress yakho
Eminyakeni embalwa eyedlule, ama-trackbacks ayevame ukusetshenziselwa abathengisi bokuqukethwe nababhulogi ukuxhumana. Namuhla, abakwa-spammers basebenzisa ama-trackbacks ukuthumela ugaxekile kumasayithi e-WordPress. Ukuze ubhekane naloluhlobo lwe-spam ye-WordPress, cabanga ukukhubaza ukulandelana kwe-trackbacks kusayithi lakho.
Ukukhubaza i-trackbacks kusayithi lakho le-WordPress, yiya ku-akhawunti yakho 'Izilungiselelo' bese uchofoza inketho 'Yokuxoxa'. Chofoza inketho ngaphansi kwe- 'trackbacks kanye nemingcele' ukuze ukhubaze amaphuzu kanye namathrekhirekhodi kusukela ekusebenzeni kusayithi lakho. I-WordPress ogaxekile nayo ingakhutshazwa ngesandla ngokuthunyelwe. Chofoza ithebhu 'Izixazululo' ukuze ukhubaze amaphuzu ezincwadini ezithile.
Susa i-Nof elandela isixhumanisi kusuka kumazwana
Uma ngabe usebenzise isixhumanisi esilandelayo kusuka kumazwana wakho, cabangela ukususa. Ezimweni eziningi, abakwa-webmasters nabathengisi baqeda ukujeziswa yi-Google ngenxa yokulayisha ngekhwalithi ephansi namazwana we-Spammy.
Ukuvala amazwana kokuthunyelwe kwakho okudala
I-spam ye-WordPress ingaba nomsindo kakhulu. Uma unokuhlanganiswa kwamazwana adlule kusayithi lakho, cabangela ukuvala amazwana kokuthunyelwe kwakho okudala. Vula 'Izilungiselelo' bese uchofoza 'Ingxoxo' ngaphansi kwezilungiselelo zakho zokubeka amazwana ukuze uvale amazwana kokuqukethwe okuthunyelwe eminyakeni eminingi edlule.
Eminyakeni embalwa eyedlule, i-WordPress ogaxekile bekuyikhathazeka enkulu kubanini bewebhu nababhulogi. Ungavumeli ukuphawula kogaxekile kudonsa umkhankaso wakho we-intanethi. Sebenzisa i-WordPress 'ukulungiswa nama-plugin ukuvimbela ukugaxeka kwamazwana kuwebhusayithi yakho.